Ny typeface vaovao any San Francisco dia misy ankehitriny | Avy amin'ny mac aho
Ny typeface vaovao any San Francisco dia azo alaina ho an'ny mpamorona
Amin'ny tranga hafa dia efa niresaka momba ny endritsoratra San Francisco ity isika izany dia natomboka tamin'ny Apple Watch ary natao ho tonga izany ny font default amin'ny rafitra Apple rehetra.
San Francisco dia natao manokana ho loharano iray manana mazava farany ary azo vakiana araka izay azo atao, mazava ho azy mbola eo am-panaovana ny fampidirana ary antenaina hahatratra ireo rafitra Apple telo amin'ny fararano.
Indrindra indrindra fa ny typeface Helvetica Neue amin'izao fotoana izao dia toa marina tsara ho an'i Apple hitandrina azy io ho default amin'ny OS X satria na dia tsy mahomby amin'ny famakiana azy aza ho an'ny habe kely, ny fisehoan'ny HiDPI vaovao dia ampy antsipiriany ka tsy olana izany. Ny fanovana dia tsara foana ary tsy tiako ny San Francisco mihitsy.
Ho fanampin'ny endritsoratra voafantina, i San Francisco dia manohana karazana fanitsiana mavitrika izay mampifanaraka ny halavany, arakaraka ny habeny voafantina sy ny elanelam-potoana. Miaraka amin'ny typeface San Francisco, ny pejin-tranonkala fonosan'ny rafitra Apple dia manome fidirana ho an'ny mpandrindra ny TextKit API ho an'ny fikirakirana endri-tsoratra, ny Apple Font Tool Suite sy ny tsipiriany rehetra momba ny endritsoratra TrueType sy Apple Advanced Typography (AAT) avy amin'ny Typeface Registry.
Ny orinasa dia namoaka kinova ny endritsoratra San Francisco ho an'ny mpamorona ao amin'ny Apple Watch miaraka aminy Modely Photoshop mamorona sary fampiharana.
Afaka mampidina ny fonosana fonosana vaovao an'i San Francisco amin'ny alàlan'ny vavahadim-pivoarana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » iOS » Ny typeface vaovao any San Francisco dia azo alaina ho an'ny mpamorona
K-tuin, mpivarotra premium an'i Apple, iharan'ny scam 60.000 XNUMX euro
Instastack dia mitondra ny fizotranao Instagram amin'ny Mac